Apple Inoburitsa Betas Yekutanga yeIOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4 uye tvOS 14.5 yeVagadziri | IPhone nhau
A new wave ye shanduro dzeakasiyana Apple anoshanda masisitimu ari kutanga kubika. Yakanga isiri nguva refu yapfuura iyo Apple yakaburitsa iOS 14.4 uye iPadOS 14.4 kuruzhinji, asi Nhasi Apple yatoburitsa yekutanga betas yeIOS 14.5 uye iPadOS 14.5 kune vanogadzira.
Sezvaunoziva, Apple inotangisa idzi Beta vhezheni kuitira kuti vanogadzira vagadzirise maapplication avo kune nyowani yekushandisa system isati yaburitswa vhezheni yepamutemo. Imhaka yeizvozvo hazvikurudzirwe kuzviisa pane edu zvishandiso kudzamara zvasunungurwa kuruzhinji sezvo vangave vane kukanganisa kunoita kuti zvishandiso zvedu zvisashande 100%.
Vagadziri vane account yakanyoreswa Idzi shanduro dzichangoburwa dzinogona kutorwa pasi kubva kuApple Development Center. Panguva ino, isu ticharamba tichitsvaga izvo zvinhu zvitsva zvinobatanidza idzi shanduro nyowani dzeanoshanda masisitimu uye isu tichagadzirisa izvo nekukurumidza sezvazvinogona.
Kune rumwe rutivi, Apple yakaburitsawo mavhezheni e tvOS 14.5 uye watchOS 7.4 , zvakare mazuva mashoma mushure mekuburitswa kweshanduro 7.3 ye smartwatch nerutsigiro rwe "Nguva yekufamba" muApple Fitness + uye kuwanikwa kukuru kweECG pamwe neFace nyowani. Nenzira imwecheteyo yeiyo iOS uye iPadOS, isu hatisati taziva izvo zvitsva zvavanosanganisa asi zvinogona kusanganisira zvimwe zvigadziriso zvisina kuitika muna 7.3. Tikangowana chimwe chinhu chitsva, tinokugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inoburitsa yekutanga betas yeIOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4 uye tvOS 14.5 yevagadziri
Iyo iPhone 12 yaive iyo iPhone inotarisirwa nevazhinji sekureva kwaApple